Farmaajo oo looga digay in uusan guul u arag sii haynta Mukhtaar Roboow..laakiin..Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia | Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia
Home Wararka Farmaajo oo looga digay in uusan guul u arag sii haynta Mukhtaar...
Farmaajo oo looga digay in uusan guul u arag sii haynta Mukhtaar Roboow..laakiin..
Wax garadka iyo aqoonyanada ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirrifle ee ku nool dalka dibaadiisa iyo gudahiisa ayaa fartiin ay u direeen MW Farmaajo ugu sheegay in sii haynta Mukhtaar Roboow uusan u arag Guul iyo in uu ka adkaaday qoowmiyada Digil iyo Mirrifle. Fartiinta ka timid qurba joogta ayaa u muuqato mid muujinayso in ayan marnaba ka tanaasulaynin taageerada ay u hayaan Mudane Shiikh Mukhtaar Roobow.
Prof Maxamed Shiikh Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacada Savanah ee Gobolka Georgia ayaa yiri “Waxaa nasiib xumo ah in Madaxweyne Farmaajo uusan aqrisan taariikhda Digil iyo Mirrifle hadii uu aqrisan lahaa falalka uu ku kacay waa uu ka waantoobi lahaa”. Waxa uu intaas ku daray ” kooxo qabiil huwan oo qoryo ku hubaysan ayaa qabsan waayay shacabka Digil iyo Mirrifle xili ka adag xiligaan, waxaan hubaan in uusan marnaba ku guulaysan doonin siyaasadiisa qabiilaysan oo uu doonayo in Digil iyo Mirrifle dib loo galiyo gumayso iyo ku tagrifal”.
Mida ka mida dhalinyarada ku nool dalka Canada aya isna raaciyay “hadii kuwa kula joogta oo uuu horeeyo Mursal iyo xildhibaanada beeca ah aad iibsatay marna ha sugin in shacabka reer Koonfur Galbeed ay noqdaan adoon adiga kuu shaqeeysa”.
Aoonyahan wax ka dhiga Jaamaca Baydhabo ayaa isna ku daray “doorashada 2020 labo sano un baa ka hartay, waxaan shaki iiga jirin in Farmaajo iyo Kheyre meel xun ku danbeeyn donna”.
Previous articleJubbaland oo ku eedaysay MW Farmaajo in uusan daacad ka ahayn dagaalka Al Shabab
Next articleWargeyska National oo iftiimiyay doorka Somaliland ee isbadalka Geeska Afrika